Filannoo Itoophiyaa 2021: ‘Beekamtii koo malee galmeen filattootaa raawwateera’ jedhe Boordiin Filannoo – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsFilannoo Itoophiyaa 2021: ‘Beekamtii koo malee galmeen filattootaa raawwateera’ jedhe Boordiin Filannoo
(bbc)—Boordiin Filannoo Itoophiyaa walgahii Kamisa Waxabajjii 03 bara 2013 A.L.I taa’e hordofee ibsa Jimaata baaseen, iddoowwan tokko tokkotti galmeen filattootaa beekamtii boordichaa malee gaggeeffamuu ibseera.
Akka ibsa boordichaatti galmeen filattootaa kun kan gaaggeeffamee buufataalee filannoo beekamtii boordichaan ala hundaa’an keessattidha.
Buufataaleen filannoo kunneenis magaalaa Finfinnee keessatti lama, magaalaa Dirree Dhawaa keessatti jaha, naannoo uummattoota Kibbaa keessatti ammoo 71 yoo ta’an, walumaagalatti buufataaleen filannoo 79 beekamtii boordii filannoo malee hundaa’anii filattoota galmeessaa turan.
Boordichi galmeen filattootaa buufataalee kanneen keessatti gaggeeffame seera-qabeessa miti jechuun murteesseera.
Boordichi buufataalee filannoo kunneen eenyuun hundaa’an, galmeen filattootaa seera-qabeessa miti jedhame eenyuun akka gaggeeffame waan ibse hin qabu.
Bufataalee filannoo kanneen keessatti namoonni meeqa akka galmaa’anis hin himamne.
Filannoo biyyaalessaa marsaa 6ffaa boordichi Waxabajjii 14 bara 2013 A.L.I gaggeessuuf jedhu irratti sagalee kennuuf walumaagalatti filattoonni miliyoona 37.4 galmaa’uu boordichi beeksiseera.
Kun naannolee filannoo 14 naannoo Somaalee keessatti qorannoof jecha galmeen filattootaa akka hin gaggeeffamne dhorkame hin dabalatu jedha ibsi boordicha.
Kanneen sagalee kennuuf galmaa’an keessaa miliyoonni 15.4 naannoo Oromiyaa keessatti yoo ta’u, miliyoonni 7.3 naannoo Amaaraa, miliyoonni 6.3 ammoo naannoo Kibbaa keessatti.
Magaalaa Finfinnee keessatti namoonni sagalee kennuuf galmaa’an miliyoona 1.8 akka ta’an boordichi beeksiseera.
Filannoon marsaa 6ffaa Itoophiyaan Waxabajjii 14 gochuuf jirtu silaa bara darbe kan godhamuu qabu ture, sababa weerara koronaavaayirasiif jecha baranatti dabarfame.
Jalqaba Caamsaa keessa godhamuuf kan ture yoo ta’u sababa meeshaalen filannoof barbaachisan walqixxaatanii hin qophoofneef yeroo lammataaf Waxabajjiitti dabarfame.
Boordichi amma dura sababa rakkoo nageenyaa filannoon guutummaa biyyattii keessatti akka hin gaggeeffamne ibsee ture.
Kana malees naannoo Somaalee dabalatee naannolee filannoo 54 keessatti Waxabajjii 14 filannoon akka hin gaggeeffamne Boordiichi Kamisa ifa godhe.
Murteen kun kan darbeef waraqaa sagaleen ittiin kennamu irratti hanqinni waan argameefi jedheera boordichi.
Naannolee filannoo kanneenii fi iddoowwan sababa rakkoo nageenyaan amma dura filannoon keessatti hin godhamu jedhame dabalatee riifarandamiin naannoo Kibba Lixa Itoophiyaa hundeessuf godhamu Qaam’ee 1, bara 2013 A.L.I’tti akka godhamu walitti qabduun boordii filannoo Aadde Birtukaan Miidhagsaa miidiyaalee biyya keessaatti himan.
Naannoo Tigraay keessatti filannoon yoom akka gaggeeffamu boordichi amma dura waan ibse hin qabu.